Bayern Munich oo xaqiijisay inay xiiseyneyso ciyaaryahanka RB Leipzig Dayot Upamecano Horyaalka Germalka
Home Horyaalka Germalka Bayern Munich oo xaqiijisay inay xiiseyneyso ciyaaryahanka RB Leipzig Dayot Upamecano
Bayern Munich oo xaqiijisay inay xiiseyneyso ciyaaryahanka RB Leipzig Dayot Upamecano
Madaxa kooxda Bayern Munich Karl Heinz-Rummenigge ayaa xaqiijiyay in kooxdiisu ay xiiseyneyso laacibka RB Leipzig ee Dayot Upamecano .
22 jirkaan ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo kooxda reer Bavaria si uu badal ugu noqdo David Alaba , kaasoo la filayo inuu ku biiro Real Madrid isagoo xor ah xagaagan.
Upamecano ayaa la fahamsan yahay inuu haysto 42m (£ 37m) oo ah qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa Leipzig kaasoo dhaq-dhaqaaqi doona xagaagan.
Haatan, Rummenigge wuxuu cadeeyay in daafaca reer France uu diirada u saaran yahay Bayern, isagoo u sheegay Sport Bild : “Dabcan waan la macaamili doonnaa, kaliya ma ahan laacibkan, laakiin mabda’ ahaan boosaska aan rabno oo aan u baahan nahay inaan wax ka qabanno. “
Markii la weydiiyay hadii heshiis la isla meel dhigi doono dhawaan, Rummenigge wuxuu ku jawaabay: “Waa xilli hore in waxaas oo kale sameyno, weli waa ciyaaryahan Leipzig ah ugu yaraan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan. Laakiin waa wax la wada ogyahay inuu qandaraaskiisa sii dhamaanayo.”
Manchester United iyo Liverpool ayaa sidoo kale la sheegayaa inay il gaar ah ku hayaan xaalada laacibka reer France.
Previous articleJamie Carragher ayaa faallo ka bixiyay hoos u dhaca Liverpool ka dib guuldaradii vs Burnley
Next articleMikel Arteta: ‘Frank Lampard wuxuu u qalmaa in waqti badan la siiyo Chelsea’